अनार कस्ता मानिसले खानु हुदैन ! -
२०७६, १३ असार शुक्रबार १७:०९ June 28, 2019 clickonLeaveaComment on अनार कस्ता मानिसले खानु हुदैन !
फलफूल खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर, केहि फलफूल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ । अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ । तर, यी ७ व्यक्तिले अनारले खानु राम्रो हुँदैन । स्वस्थ्यमा सुधार अौनुको साटो झन् बिग्रिन सक्छ ।
१- दमका रोगी दमका रोगीले अनार खाँदा दम झन् बढ्ने हुँदा दमका रोगीले अनार खानु हुँदैन ।
२- कब्जियत अनारमा फाइबर्सको मात्रा अधिक हुने हुदा कब्जियत र पेटमा ग्याँस बढाउँछ । त्यसैले यस्तो समस्या हुनेले पनि अनार खानु हुँदैन ।
३- मधुमेहका रोगी अनार खानाले सुगरको मात्रा बढ्ने हुँदा मधुमेहका रोगीले अनार खानु हुँदैन ।
४- कलेजोमा समस्या भएका व्यक्ति अनारमा पाइने एंजाइम्सले कलेजोको एंजाइम्समा असर गर्ने हुनाले कलेजोमा समस्या भएका व्यक्तिले अनार खानु हुँदैन ।
५- प्रेसर लो हुने व्यक्ति अनारमा पाइने एन्टीअक्सिडनंट्सका कारण प्रेसर लो हुने हुँदा प्रेसर लो हुने ब्यक्तिले अनार खानु हुँदैन ।
६- औषधि लीरहेको व्यक्ति यदि तपाई ब्लडप्रेसर वा कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधि लीरहनु भएको छ भने अनार खानु हुँदैन । अनार खाँदा औषधिले काम गर्दैन ।
७-तौल घटाउन चाहने व्यक्ति यदि तपाई आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने अनार नखानुहोस् । अनार खादा तौल घट्नुको साटो बढ्न थाल्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा सरकार ढाल्ने चेतावनी
शनिबारको दिन यि कार्य गर्नु हुदैन
शाकाहारी भोजन उत्तम भोजन
२०७५, १७ आश्विन बुधबार ०३:१७ October 3, 2018 clickon
कम्मरका लागि व्यायाम : कम्मर दुख्छ यसरी गरौ व्यायाम
२०७५, ११ असार सोमबार १२:२७ June 25, 2018 clickon
के तपाई लाई थाहा छ पनिर खाने उचित समय कुन बेला होला???
२०७५, १ पुष आईतवार ००:५९ December 16, 2018 clickon
गुल्मीमा पहिरो : १० जनाको मृत्यु २ बेपता
बोल्ड सिन लिक भएपछि राधिका आप्टेलाई तनाव
टी-२० विश्वकप छनोट : कतारसँग नेपालको हार,विश्वकप यात्रा कठिन
गुल्मीमा पहिरो : ६ को मृत्यु
टी–२० विश्वकप क्रिकेट एसिया क्षेत्र छनोट : नेपालले दियो कतारलाई १२३ रनको लक्ष्य
कश्मिर मुद्दा समाधान गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव
रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा चालकको मृत्यु
तपाईंको आजको राशीफल (मङलबार २०७६ श्रावण ०७) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
मंगलवार हनुमान पुजा
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को पहिलो गित ‘दुबो फुल्यो’ सार्वजनिक
बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी, सर्पदङ्शलगायतका विपदमा १९५ को मृत्यु